ဖြူဖြူထွေးကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ မင်းခန့်ကျော်ဆိုတာ ဒီကောင်လားဆိုပြီး အထုပ်ဖြည်ပြလိုက်တဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်ကြီးဟန်ငြိမ်းဦး – CharTake
chartake | August 28, 2020 | Cele News | No Comments
ဖြူဖြူထွေးကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ မင်းခန့်ကျော်ဆိုတာ ဒီကောင်လားဆိုပြီး အထုပ်ဖြည်ပြလိုက်တဲ့ ဆယ်လီစုံထောက်ကြီး ဟန်ငြိမ်းဦး
ဖြူဖြူထွေးကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ မင်းခန့်ကျော်ဆိုတာ ဒီကောင်လား ။ သူများအကြွေးသာ မဆပ်နိုင်တာ ကလပ်မှာတော့ ဆော်လေးတွေ ခေါ်ပီး သာယာနေတယ်ဟ…
အစကတော့ မတင်တော့ဘူးလို့ နေနေတာ ။ ပရိတ်သတ်က တောင်းဆိုတော့လည်း တင်ရတာပေါ့ ။ နေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်တို့ သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားတွေကို အောက်ဈေးနဲ့နှိမ်ပီး ရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ငွေအကျေမချေပဲ ကလပ်မှာတော့ ဘောစိအထာနဲ့သုံးဖြုန်းနေတာသာ ကြည့်လိုက်တော့ …
၃၅ လမ်း ၃၆ လမ်းက အကြွေးရှင်တွေကိုလည်း သွားဆပ်လိုက်အုံး ။ သူများ အကြွေးတွေ မဆပ်ပဲရှောင်နေပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ မဖြူစင် သူတော်ကောင်းကြီးလိုလို သူရဲကောင်းကြီးလိုလိုနဲ့ သူများကို လက်ညိုးလိုက်ထိုး အပြစ်တွေလိုက်ပြော နေတာ မရှက်ဘူးလားဗျာ…. Crd … Han Nyein Oo
Unicode … ဖွူဖွူထှေးကို မနာလိုဖွဈနတေဲ့ မငျးခနျ့ကြျောဆိုတာ ဒီကောငျလားဆိုပွီး အထုပျဖွညျပွလိုကျတဲ့ ဆယျလီစုံထောကျကွီး ဟနျငွိမျးဦး
ဖွူဖွူထှေးကို မနာလိုဖွဈနတေဲ့ မငျးခနျ့ကြျောဆိုတာ ဒီကောငျလား ။ သူမြားအကွှေးသာ မဆပျနိုငျတာ ကလပျမာတော့ ဆျောလေးတှေ ချေါပီး သာယာနတေယျဟ…
အစကတော့ မတငျတော့ဘူးလို့ နနေတော ။ ပရိတျသတျက တောငျးဆိုတော့လညျး တငျရတာပေါ့ ။ နဒှေေးနဲ့သံစဉျမောငျတို့ သိနျးပေါငျးမြားစှာ အကုနျကခြံ ရိုကျကူးထားတဲ့ ကားတှကေို အောကျဈေးနဲ့နမျပီး ရောငျးပေးမယျဆိုပွီး ငှအေကမြေခပြေဲ ကလပျမာတော့ ဘောစိအထာနဲ့သုံးဖွုနျးနတောသာ ကွညျ့လိုကျတော့ …
၃၅ လမျး ၃၆ လမျးက အကွှေးရငျတှကေိုလညျး သှားဆပျလိုကျအုံး ။ သူမြား အကွှေးတှေ မဆပျပဲရာငျနပွေီး ကိုယျတိုငျကတြော့ မဖွူစငျ သူတျောကောငျးကွီးလိုလို သူရဲကောငျးကွီးလိုလိုနဲ့ သူမြားကို လကျညိုးလိုကျထိုး အပွဈတှလေိုကျပွော နတော မရကျဘူးလားဗြာ…. Crd … Han Nyein Oo